What is The Right Number of Plants For My Grow Setup? - News - Light On
“ ဒီစက်ရုံကြီးမှာဘယ်လောက်အပင်စိုက်နိုင်လဲ။ ”
We hear this questionalot, especially from first-time growers hoping to make the most of their space.
It’s an understandable question. You know the plants are going to get bigger, so you can’t cram containers together. But you also don’t want to lose an opportunity for maximum yields.
The first thing to understand is that there is no exact equation for the “right” number of plants for your space. The size of your plant is variable depending on the amount of time spent in veg. The longer you veg, the larger your plant will be before switching to flower (unless you are growing auto-flower plants). Some growers prefer very large plants and might only have one plant per light ina4X4 space. Other growers prefera“Sea of Green” approach with many small plants in the same space 4X4 space. Most growers prefer something in between these two extremes with around nine plants ina4X4 grow space. This will give you about one square foot per each plant. Auto-flower plants will always be the same size as they do not haveaveg period. Auto-flower plants will flower automatically based onafixed time schedule. The size of auto-flower plants will dependalot on the specific strain.
သိသာထင်ရှားတဲ့သင်ကြီးထွားလာတဲ့အပင်အရေအတွက်ဟာသင်ရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းပမာဏပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ မြင့်မားသောမျက်နှာကျက်နှင့်ပွင့်လင်းသောအခန်းတစ်ခန်း၌ပြင်ပနှင့်ဆင်တူသည့်အလွန်ကြီးမားသောအပင်များကိုစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ ကြီးထွားလာသောတဲတစ်ခုတွင်အပင်များသည်ကြီးလွန်း။ မီးများနှင့်မနီးမဝေးကိုသတိပြုရန်လိုအပ်သည်။ အရွက်များထိတွေ့သောအခါသို့မဟုတ်အပင်များတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အရိပ်ပြုနေသည့်အပင်များကိုအတူတကွစုစည်းထားခြင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်မကောင်းသောအကြံအစည်ဖြစ်သော်လည်းသေးငယ်သောနေရာများတွင်အမြဲတမ်းမဖြစ်နိုင်ပါ။
But in all honesty, you should consider more than just the amount of space available to you when deciding how many plants to grow.
We’re going to make this really simple withastep-by-step guide for determining the best number of plants for your grow setup. Each step will help you narrow down the possibilities.
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားအနိမ့်၌အိမ်စိုက်ပျိုးသူများအပန်းဖြေရန်ရည်ရွယ်သောအပင်ခြောက်ပင်ထက်မကကိုစိုက်ပျိုးနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်နေထိုင်ရာနေရာ၏ပေ ၁၀၀ areaရိယာ၌သင်ကြီးပွားနိုင်သည်။
In Alaska, each adult over the age of 21 is permitted to possess up to six plants. However, only three of those plants can be flowering at one time.
စီးပွားဖြစ်ကြီးထွားမှုတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ကန့်သတ်ချက်များသည် ပို၍ ပင်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။
Next, consider the measurements of your grow room, grow tent, or grow facility. Determine how many plants you can reasonably fit without crowding them.
အထွေထွေစည်းကမ်းချက်မှာစက်ရုံတစ်ခုစီအတွက်စတုရန်းပေကိုခွင့်ပြုရန်ဖြစ်သည်။ Sea of ​​Green နည်းလမ်းကိုသင်အသုံးမပြုပါကအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏အပင်များထက်ကြီးထွားစေလိုလျှင်အပိုနေရာချထားပါ။ မီးများပေါ်တွင်သင်နေရာမည်မျှရှိသည်ကိုဂရုပြုပါ။ ပန်းပွင့်သို့ပြန်သွားလျှင်အပင်အများစုသည်အမြင့်နှစ်ဆတိုးလိမ့်မည်။ ဤသည်အများအပြား indica မျိုးကွဲနှင့်အတူများစွာသော sativa မျိုးကွဲနှင့်အတူလျော့နည်းဖြစ်နိုင်သည်။ သင်၏စက်ရုံအားအလင်းရောင်ရစေမည့်အလင်းထဲသို့ကြီးထွားစေလိုမည်မဟုတ်ပါ။
အဆင့် ၃။ သင်မည်မျှကြိုးစားအားထုတ်လိုသည်ကိုဆုံးဖြတ်ပါ
On the other hand, if you’re creatingahome grow setup, your level of interest in this hobby should come into play.
သင်၌အပင်များများများလေလေ၊ သင်၏အပင်များကိုအစားထိုးခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက်သင်အချိန်ပိုရလေလေဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏နေရာကိုအမှန်တကယ်ထုပ်ထားပါကနောက်၌ရှိသောအပင်များသို့ရောက်ရန်ခက်ခဲသောကြောင့်အလုပ်ကိုလည်း ပို၍ စိတ်ပျက်စရာကောင်းနိုင်သည်။
However, if you expect to enjoy the time you spend on cultivation,alarger crop can be the more rewarding choice. It really depends on how much you want to put into this endeavor.
The number of plants you grow influences not only the process of cultivation, but also the outcomes. Here areafew helpful questions to ask yourself:
---Am I Eager to Get to Harvest?
သင်တို့တွင်အပင်များများများလေလေကြီးထွားမှုသံသရာကြာလေလေဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုပိုသေးသောအပင်ငယ်များသည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များတွင်ကြီးထွားရန်၊ ဖွံ့ဖြိုးရန်နှင့်ရရှိနိုင်သောနေရာကိုဖြည့်ရန်အချိန်ပိုလိုအပ်သည်။
If you want to get through veg and onto flower faster, you should grow more smaller plants.
---Do I Want Higher Yields?
အထွက်နှုန်းမြင့်မားခြင်းသည်ထိပ်တန်း ဦး စားပေးဖြစ်လျှင်အမြင့်ဆုံးအပင်အရေအတွက်နှင့်အတူသွားပါ။ ပိုမိုမြင့်မားသောဘူးသီးများနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်သောရိတ်သိမ်းမှုတို့အကြားမြင့်မားသောအသံအတိုးအကျယ်ကြီးထွားမှုသည်ပိုကြီးပြီးပိုမြန်လာသည်။ တစ်နှစ်လျှင်ရိတ်သိမ်းမှုပိုမိုတိုတောင်းသော veg အချိန်ကာလနှင့်လည်းရနိုင်သည်။
This can especially feel likeavictory when you consider the resources that go into it. You get more bang for your buck in terms of equipment costs, energy consumption, and time.
---Do I Want Variety?
If you want to experiment with different strains, you have to grow more plants.
However, it should be noted that different strains often have different needs in terms of nutrients, irrigation, and light intensity. So, diversifying your crop requiresalittle extra work and attention on your part.
အဆင့် ၅။ သင်၏ကြီးထွားမှုတည်ဆောက်မှုအတွက်သင်ရွေးချယ်သောအလင်းစွမ်းရည်ကိုစစ်ဆေးပါ
Do you know the footprint of your LED grow light? This should beatop consideration. If you grow more plants than your grow light covers, you are going to haveadisappointing harvest.
ဥပမာအားဖြင့်သင်၏ကြီးထွားမှုတည်ဆောက်ပုံသည် LED ကြီးထွားမှုအလင်းရောင်တစ်ခုဖြင့် ၃ ဆ x ၃ coverage လွှမ်းခြုံနိုင်သောareaရိယာဖြစ်သည်။ သင်သည်ထိုအလင်းတွင်တိုးပွားလာသောပျှမ်းမျှအရွယ်အပင်ကိုးမျိုးထက်မကြီးနိုင်ပါ။ သင်မြင်သောအလင်းသည်ထိုပတ်လည်အတိုင်းအတာအပြင်ဘက်တွင်ကျရောက်နေသည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်အရည်အသွေးရှိသောအလင်းမဟုတ်ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ Light On Technology မှကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့သို့ ကျေးဇူးပြု၍ လှည့်ပါ။ သင့်အားအလင်းရောင်မှန်မှန်ရွေးချယ်ရန်နှင့်အထွက်နှုန်းတိုးစေရန်မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုဖြင့်ကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့အစဉ်လာနေသည်။